​स्याउका बिरुवा बिक्रीबाट कालिकोटका किसानले ३७ लाख आम्दानी गरे
कालिकोट । यस वर्ष स्याउका बिरुवा बिक्रीबाट कालिकोटका किसानहरुले मनग्य आम्दानी गरेका छन् । यस वर्ष जिल्लाका बिभिन्न ठाउँमा रहेका नर्सरीबाट स्याउका बिरुवा बिक्री गरेर किसानहरुले मनग्य आम्दानी लिएका हुन्..
कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न खाद्य सुरक्षाको रक्षाका लागि भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार हुँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ को कार्यान्वयनका लागि सरकारले भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । जमिनको वर्गीकरण गरी निश्चित क्षेत्रमा कृषि, आवास, उद्योग, जङ्गल एवम् खानी सञ्चालन..
अष्ट्रिच प्रालिले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको मासु तथा अन्य अङ्ग निर्यात गर्ने
काठमाडौं । अष्ट्रिच प्रालिले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको अष्ट्रिचको मासु तथा अन्य अङ्ग निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीले अबको ५ वर्षभित्र रू ५ अर्बको मासु र साढे..
राष्ट्रिय सिनियर पुरुष र महिला क्रिकेट टोलीलाई टेलिकमको साथ
काठमाडौ । नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय सिनियर पुरुष र महिला टोलीलाई वार्षिक रू. ८५ लाख बराबरको प्रायोजन गरेको छ । नेपाल टेलिकमद्वारा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक वुद्धिप्रसाद आचार्य..
औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको बाटो खुल्यो
भैरहवा । नयांँ उद्योगमा लगानी गर्न तयार भएका उद्योगीहरुलाई लक्षित गरेर रुपन्देहीको मोतीपुरमा बन्न लागेको नया औद्योगिक क्षेत्रको काम अब नयांँ ढंगबाट सुरु हुने भएको छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य..
सुदूरपश्चिममा ७० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न सरकार कमजोर
धनगढी । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमलाई छुट्टयाउने विकास बजेट पर्याप्त मात्रमा खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । विकास बजेट धेरै नआउने गुनासाहरु अधिक सुनिने गरेपनि आएको बजेटलाई समयमै सदुपयोग..
​दैनिक ३६ करोडका कृषि वस्तु आयात, ८ महिनामा मात्रै ७० अर्ब १६ करोडको व्यापारघाटा
काठमाडौं । मागबमोजिम स्वदेशमै उत्पादन नहुँदा दैनिक ३६ करोड रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेका छन् । भन्सार विभागका अनुसार चालू आवका ८ महिनामा कृषिजन्य वस्तुमा मात्रै ७० अर्ब..
बूढीगण्डकीको कार्यालय भवन बनाउन ७३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण
गोरखा । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन सञ्चालन प्रयोजनका लागि ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक गाविस–९ स्थित सिउरेनीटारमा कार्यालय भवन..
​जुनार बिक्रीबाट सात करोड आम्दानी
सिन्धुली । सिन्धुलीमा यस बर्ष जुनार बिक्रीबाट सात करोड आम्दानी भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । रतनचुरा, बासेश्वर, तीनकन्या, जलकन्या, मधुवालगायतका गाविसबाट सात करोड बराबरको जुनार बिक्री भएको बाली..
अष्ट्रेलिया पाँचौं पटक विश्व च्याम्पियन, न्यूजिल्याण्डलाई ७ विकेटले पराजित
काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डविरुद्ध सहज जित हात पार्दै अष्ट्रेलिया पाँचौं पटक वन डे क्रिकेटको विश्व च्याम्पियन बनेको छ ।आइतबार भएको फाइनलमा कप्तान माइकल क्लार्क र स्टिभ स्मिथको शतकीय साझेदारीको मदतमा न्यूजिल्याण्डलाई..
१४ करोडको लगानीमा गाई फार्म संचालन, दैनिक ५ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्ने
बनेपा । काभ्रेका युवा व्यवसायी रामबहादुर गौतमले पात्लेखेत–३, डाँडागाउँमा १४ करोड रुपैयाँको लगानीमा गौतमश्री अर्गानिक एन्ड काउ फार्म सञ्चालनमा ल्याएका छन्। फार्ममा उन्नत नश्लका गाईपालनका साथै अर्गानिक तरिकाले खेती समेत..
​ढिलै भएपनि सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य, प्रतिक्वीन्टल ४६१ रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले चालु सिजनका लागि उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले उखुको प्रवर्द्धन मूल्यसहित प्रतिक्वीन्टल ४ सय ६१ रुपैयाँ तोकेको जनाएको छ । सरकारले क्वीन्टलमा गत वर्षभन्दा १५..
​धन कमाउन गएकी चेलीको लास पो आयो
सिन्धुपाल्चोक । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा इराक पुग्नुभएकी सिन्धुपाल्चोकको गाति गाविस– ७ मान्द्रा गाउँकी गँगा तामाङको घरमा सब पो आइपुग्यो । एक वर्ष अघि विदेशिएकी गँगाको पैसा कमाएर सुखका साथ जिवन..
​भारतीय माछाले नेपाली माछा बजारमा प्रभाव, कृषकहरु असन्तुष्ट
रुपन्देही । आफ्नो १२ बिगाहा जमिनमा विगत एक दशकदेखि माछापालन गर्नुभएका रुपन्देहीको नरेनापुरका अनुपमान श्रेष्ठलाई हाल पहिले जस्तो उत्साह छैन् । माछाको उत्पादन राम्रो भएपनि यसले प्रयाप्त बजार नपाएका कारण..
​नेपालकै ठूलो जुटमिलमा आगलागी, आगो निभाउने प्रयास जारी
सुनसरी । नेपालकै ठूलो जुटमिलको रुपमा परिचित सुनसरीको सोनापुरस्थित अरिहन्त मल्टिफाइवर्स लिमिटेडमा आगलागी भएको छ । बुधबार विहान साढे ११ बजेदेखि आगो लागेको हो । इटहरी, धरान, इनरुवा, विराटनगरको दमलको सहयोगमा..
भारतले पानीको नहर बन्द गरेपछि गण्डक जलविद्युत उत्पादन ठप्प
नवलपरासी । भारतले पानीको नहर बन्द गरिदिएपछि नवलपरासीस्थित गण्डक जलविद्युत केन्द्र सुर्यपुराको विजुली उत्पादन बन्द भएको छ । भारतले पूर्व सूचना नै नदिई नहरको पानी बन्द गरिदिएपछि २० दिन अघिदेखि..
​फुङ्लिङ आगलागीमा ३ दर्जन घर क्षणभरमै खरानी भए
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङ्लिङ बजारको तोक्मेमा गएराति भएको भीषण आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको छ । स्थानीय पूर्वेली होटेलबाट ग्यास चुहावट भई शुरु भएको आगलागीबाट ३५ घर जलेर..
​छोरीको बञ्चरो प्रहारबाट बाबुको मृत्यु, आमा घाइते
बाग्लुङ्ग । बाग्लुङको तित्याङ–८ मा छोरीको वच्चरो प्रहारवाट बावुको मृत्यु भएको छ । आमा घाइते भएकी छिन् । ४० वर्षिय शर्मीला थापाको वञ्चरो प्रहारवाट करिव ८० वर्षिय पतिराम थापाको घटना स्थलमै..
ब्यवसायिक कृषि आयोजनाको रकम दुरुपयोग
काठमाडौं । सरकार र विश्व बैंकले कृषि उत्पादन र बिक्री वितरणलाई ब्यवसायीकरण गर्न संयुक्त रुपमा संचालनमा ल्याएको कार्यक्रम नै व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) हो । यस आयोजनाको अनुदान..
पक्राउ परेका प्रदीपजंग पाण्डेको मुटुमा समस्या, गंगालालमा भर्ना गरियो
काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको मुटुमा अचानक समस्या देखिएपछि उनलार्इ अस्पताल भर्ना गरिएको छ। पाण्डेलाई काठमाडौंको बाँसबारीस्थित शहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना गरिएको..
​​द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर, जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई
काठमाडौं । निजगढ द्रूत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) निर्माण सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एण्ड एफएस) कम्पनीबीच..
​तामाकोशी आयोजना विरुद्ध स्थानीय वासिन्दा फेरि आन्दोलित
काठमाडौ । दोलखाबासीहरु १६ बुँदे माग अघि सार्दै अपर तामाकोशी हाईड्रो पावर कम्पनी विरुद्ध आन्दोलित बनेका छन । अपर तामाकोशी सरोकार संघर्ष समिति दोलखाको नाममा संगठित भएका उनीहरुले शनिवार रिपोर्टर्स क्लब..
​१८औं पुष्प ब्यापार मेला काठमाडौंमा हुने
काठमाडौं । फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपाल ९फ्यान० को आयोजनामा चैत्रको पहिलो हप्ता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुष्प ब्यापार मेला हुने भएको छ । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालको आयोजनामा हुन लागेको यस मेलालाई नेपाल सरकार..
राजधानीमा सुरु भयो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डमा बिहीबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सुरु भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापाले एक समारोहबीच मेला उद्घाटन गरे । मेलामा नेपालसहित आठ देशका तीन सय..
​संसारको ८ डरलाग्दा बंजी जम्पभित्र भोटेकोसी पनि
सन् १९८८ मा एजे ह्याकेट र हेनरी भान एचले संसारको पहिलो व्यवसायिक बंजी जम्प न्यूजिल्याण्डको ४३९ फिट अग्लो मा रहेको कुवाराउ ब्रिजमा बनाएका थिए । स्थापनाको करिब ३० वर्ष पुग्न लाग्दा..
​घटेर पनि व्यवसायीले लागु नगरेको भाडादर राजपत्रमा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले घटेको भाडादर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । भाडा घटेपनि सार्वजनिक गाडीमा लागू नभएपछि राजपत्रमा नै प्रकाशित गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताउनुभयो ।..
​सहकारी, वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौती : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले वित्तीय स्थायित्वका लागि सहकारी चुनौति बन्दै गएकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको संयोजनमा विहीबारदेखि शुरु भएको दुईदिने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक..
​सिजीको “क्विक्स पाटेटो क्राक्स” नेपाली बजारमा
काठमाडौं । सिजी ग्रुपको सिजी फुड्सले क्विक्स पोटेटो क्राक्स नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो पोटेटो क्राक्समा भिन्न र एकदमै नयाँ स्वाद पाउने कम्पनीले जनाएको छ । उच्च गुणस्तरीय आलुको मिश्रणबाट..
​सहकारीका सञ्चालकले तीन करोड लिएर भागे
मोरङ । मोरङको विराटनगरमा सञ्चालित गजलक्ष्मी सहकारी संस्था लिमिटेडका पदाधिकारीहरुले ग्राहकले बचत गरेको तीन करोड रूपैयाँ लिएर फरार भएका छन् । गत तीनदिनदेखि सहकारी संस्थामा ताला बन्द गरी सञ्चालक समिति अध्यक्ष..
​औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त बजेट चाहीयो : उद्योग मन्त्री
काठमाडौं । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले आर्थिक अवस्थामा सुधार गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान आगामी आवमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन पार्टीका शीर्ष नेता र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसँग पहल शुरु गरेका..
Results 344: You are at page 10 of 12